[RASMI] dr.fone Qalabka - Android Data Recovery The Best Waayo, 2017
dr.fone xidhmo - Android Data Recovery
software kabashada xogta 1aad adduunka ee casriga ah Android iyo kiniiniyada.
heerka ugu sarreeya kabashada in industry ee.
Jaanqaadaan 6000+ qalabka Android.
Ugu deeq u Gaarka ah (on Mobile oo keliya)
Iibso, waayo, Windows Buy for Mac
Fiiro gaar ah: Isticmaal barnaamijka on your computer Windows / Mac OS.
Badiyay Xogta laga Android?
xogta laga badiyay aan laga badiyay. Waxaan soo kaban karo files tirtiray on Android ka xaalado badan oo caan ah.
Card SD Issue
xogta laga badiyay ay sabab u tahay update OS
Xogta la la'yahay kadib markii afjarno ama Laydh iftiimaya ROM
Hubi & Kulanka Xiisaha for Free
Haddii aad qabto wax fikrad ah kama saabsan in xogta aad ka lumay on Android la soo kabsaday karo ama ma, waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad si xor ah u horeysay waxa laga baarayo. scan ka dib, waxaad ku eegaan karo xogta laga helay. Waa lacag la'aan.
Files kala duwan waxay yihiin
Tani software Android kabashada xogta kuu ogolaanaysaa inaad soo kabsado tirtiray ama laga badiyay xiriirada, fariimaha qoraalka ah, sawiro, fariimo WhatsApp, music, video iyo waraaqo dheeraad ah.
Marka aad ka heli xogta aad laga badiyay qalabka Android, waxaad dooran kartaa wax kasta oo aad rabto in aad iyo badbaadin on your computer la mid click.
Taageerada 6000+ daydo Android
Waxaad isticmaali kartaa this app Android kabashada xogta inuu ka soo kabsado xog ku saabsan in ka badan 6000 Telefoonada Android iyo kiniiniyada ka Samsung, HTC, LG, Sony, Motorola, ZET, Huawei, iwm Liiska qalabka taageeray weli waxaa sii kordhaya si degdeg ah.
Rujin & Unrooted Android Qalabka
Tani qalab Android kabashada xogta u shaqeeya labada qalabka Android xidid iyo unrooted, laakiin ma beddeli doonaa wax on. Qalabka wuxuu u rujin la weli rujin doonaa, oo mid ka mid ah unrooted sidoo kale sii joogi doonaan.
ka Card SD soo kabsado Data
Sida in kaarka SD on Android ah, waxaad si toos ah iskaan kartaa telefoonka ama kiniin ah, ama u xirmaan akhristaha kaarka. Labada shaqo.
Tani software Android kabashada xogta kaliya akhriya xogta ku saabsan telefoonka Android ama kiniin. Ma ka beddeli doonaa wax, sii ama daadato wax on qalab aad dadka kale.
kabashada xogta Android codadka wax xirfad quruxsan. Run ahaantii, laakiin dadka aan wax xirfadaha kombiyuutarka xirfadeed si fudud xamili karo. Iskaan, Xiisaha iyo kabsadaan. All aad u baahan tahay si ay u qabtaan waa saddexdan talaabo ilmaha.
Dhamaan dadka isticmaala for this software Android kabashada xogta ku raaxaysan karaan hagaajinta xorta ah ee mustaqbalka. adeega macaamiisha waxaa sidoo kale ka mid ahaa.
Iskaan inuu ka soo kabsado xogta tirtiray ka qalab Android
Iskaan kaadhka xusuusta aad on qalabka Android inay ka soo kabsadaan xogta
Isku day Waxaa Free Wixii 30 maalmood!
Kabsado dhammaan xogta, ama faylasha la doortay
Adiga kaliya ayaa ka heli kartaa xisaabtaada iyo files
3 tallaabo fudud: xirmaan, scan iyo kabsado on Android
" Xidhmo dr.fone waa app desktop for Windows kumbiyuutarada ah. Just ku rakibi, ka dibna bilowdo barnaamijka oo lagu xiro qalabka aad si aad u computer. From waxaa jira, waxaad ka raadin kartaa sawiro tirtiray, fariimaha qoraalka ah, videos, xiriirada iyo in ka badan si fudud. Baro wax badan >>
- From Softonic, taasoo keentay software download site leh 100 milyan oo qof ay maalin kasta
" Xidhmo dr.fone for Android leeyahay fudud ah si ay u isticmaalaan interface noqon kara navigation by users oo heer kasta ah ee khibradda. Waa miisaanka yar oo uusan isticmaalin lacagta badan ee khayraadka nidaamka. Guud ahaan, xirmada this qalab halkii waxtar leh oo aad ka heli karto ka mid ah xaaladda yar dhegdheg marka ay timaado soo kabashada xogta aallada Android aad. Wax badan ka baro >>
Best Software Recovery Data
Dr. Fone ayaa UI cajiib fudud tilmaamaha si yaab sharxay tallaabo-tallaabo, si aan waxba suurto gal xumaan kara. Tani waa Software ugu fiican Recovery Data Waxaan soo gaarto.
Waxa uu ka shaqeeyaa !!!!!!!!!!!!!!! =)
Sameeyey casriyayn ee Android on my qod6 in 5.1.1 iyo xiriirada aan la waayey (sida idinkaa doono). Dr Fone kabsaday liiska buuxa (in kastoo aan markii hore si ka rujin my phone). Waxa uu isticmaalaa habab kale ah soo saaro xogta. qiimaha yar in ay bixiyaan badbaado dameer weyn.
Sidee inuu ka soo kabsado masaxay fariimaha qoraalka ka Android Qalabka